भाइरल अमित राई र गायक समिरबीच चल्यो घमासान दोहोरी (भिडियो हेर्नुहोस)
September 6, 2020 1205
पछिल्लो समय सामाजिक संन्जा’लमा रातारात भाइ’रल बनिर’हेको नाम हो,अमित कु’मार राई उर्फ ज’न्तरे मामा । बिभिन्न सामाजिक संन्जालह’रुमा भेटिए अर्का नारायण गोपाल भन्ने टाईटल’मा भिडि’योहरु सार्वज’निक हुन् थाले पछि उनि रातारात भाइर ल बनेका हुन् ।
पाँचथरको फिदिममा जन्म लिए’का उनि यति बेला ४८ वर्षका भए । हाल उनि मोरङ’को पथरी शनिश्चरे नगरपालिका २ मा बसो’बास गर्छन् । सानो उमेर देखीनै गाउँन रुची राख्ने उनको प्रति’भा दर्शक श्रोता सम्म पुग्न निक्कै कठिन थियो ।
उमेरमा गाउँ घर’मा हुने सासकृतिक का’र्यक्रम भाग लिएर उपस्थितहरुलाई मन्त्रमग्न बनाउथे । उनि सानै उमेर देखी स्व. स्वरसम्राट नारायण गोपा’लका गीतहरु गाउँन रु’ची राख्दथे रे । त्यहि भएर पनि होला उनलाई ‘भेटिए अर्का नारायण गोपाल’ भन्ने टा’इटल दिएको ।
यतिबेला उनको आवा’जले देश तथा विदेशमा रह’नुहुने नेपालीहरु बाट निक्कैनै चर्चा पाउन था’लेको छ । सोहि अनुरुप पुर्वका चर्चित गायक समिर बि.क पनि उनलाई भेटन आए’का छन् ।
उक्त भेटमा समिर र जन्तरे मा’माले निक्कै भला’कुसारी गरेका छन् । उनिहरु बिच गीत गाउने कुरामा प्रस्ति’सप्रदानै चल्छ । त्यो माहोल एक दमै रमाईलो रहेको छ । कुराका’नीमा एक अर्काले स्व’रको तारीफ गर्दा माहोल एकदमै भावुक बन्यो ।
Prevफोटो फिरिममा पछि शिशिर भण्डारीको अर्को रुवाउने म्युजिक भिडियो (भिडियो हेर्नुहोस)
Nextघट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नुहोस्
घट्यो आज सुनको भाउ, तोलाको कति पर्छ ? हेर्नु`होस्
पशुपतिनाथको दर्शन गर्दै आज बुधबारको राशिफल हेर्नुहोस्
निर्माणाधीन घरको पानी ट्यांकीमा डुबेर एक बालिकाको मृ`त्यु
पल शाह अभिनित नयाँ गीत सार्वजनिक (भिडियो सहित)